Wararka - Maxay wax soo saarka boorsada gaarka ahi u leedahay “MOQ”?
Waxaan rumaysanahay in qof kastaa la kulmi doono dhibaatada amarka ugu yar marka la raadinayo soosaarayaasha si ay u habeeyaan boorsooyinka dhabarka. Maxay warshad kastaa u leedahay shuruudo MOQ ah, maxayse tahay tirada ugu macquulsan ee ugu yar ee warshadaha habaynta bacaha?
Tirada ugu yar ee dalbashada boorsooyinka dhabarka lagu sameeyo waxaa guud ahaan lagu dejiyaa 300 ~ 1000. Markay warshaddu weynaato, ayaa sareysa tirada ugu yar ee dalabka. Waxaa jira saddex sababood oo waaweyn.
1. Qalabka. Marka ay warshaddu soo iibsanayso alaabta ceyriinka ah, waxaa sidoo kale jira xaddidaadda ugu yar ee xaddidaadda. Waxyaabaha ugu muhiimsan guud ahaan waxay leeyihiin ugu yaraan tirada ugu yar ee 300 yaard ah (ilaa 400 boorsooyin ayaa la samayn karaa). Haddii aad kaliya sameyso 200 jawaan, markaa soo-saaraha waa inuu ku sii jiraa Maaddooyinka ay ka kooban yihiin 200-kiish ee soo socda;
2. Kharashka ku baxa caaryado caado u ah boorsooyinka dhabarka iyo horumarka dhabarka, haddii aad sameysid 100 ama 10,000 boorso, waxaad u baahan tahay xirmo dhammaystiran, boorso caadi ah, sambal samaynta iyo caaryaduhu waxay u baahan yihiin US $ 100 ~ 500 kharashka caaryada, Ka yar tirada amarka , wadaagista kharashka badan;
3. Kharashka wax soo saarka ballaaran ee boorsooyinka la qaabeeyay: Boorsooyinku waa kuwo si shaqsi ah u shaqeeya. Markay tiradu yaraato, ayaa gaabiska xawaaraha shaqaalaha wax soo saarka. Kaliya aqoon u leh geeddi-socodka, way dhammaatay. Kharashka shaqaaluhu waa mid aad u sarreeya.
Sidaa darteed, MOQ wuxuu ku xiran yahay kharashka. Isla boorsada, haddii aad sameysid 100, qiimaha keliya wuxuu kudhowaad ahaan doonaa 2 ~ 3 jeer 1000.